Ọrụ OEM - Guangdong Shengte Electric Co., Ltd.
Usoro usoro iwu ịtụ
Anyị na-enye ngwaahịa na teknụzụ nhazi zuru oke, ọkwa teknụzụ dị elu, ụzọ nnwale zuru oke, ọkọlọtọ dị elu na ịdị elu dị elu.
Ihe ohuru ohuru nke teknụzụ ngwaahịa, nrụpụta ọrụ dị elu, iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa, yana dozie nsogbu maka ndị ọrụ na teknụzụ na mgbe ire ere.
Ọ bụrụ na ị na-achọ transformer omenala, biko kpọtụrụ anyị!
Iji nye egwuregwu zuru oke na uru akụ nke ụlọ ọrụ nke akụkụ abụọ ahụ, n'ikwekọ na ụkpụrụ nke uru ọ bụla, mmeri na mmepe nkịtị, akụkụ abụọ ahụ ruru usoro ndị a na mmepụta OEM:
1. Ngbanwe nke ihe kredit nke ụlọ ọrụ n'etiti akụkụ abụọ ahụ ga-abụrịrị ezigbo ma dị irè, ma ọ bụghị ya, ihe efu na-esi na ya pụta ga-abụ onye ahụ mebiri emebi.
2. Ụzọ nke imekọ ihe ọnụ
1. Party A inyefe Party B na-emepụta transformers na ngwaahịa ndị ọzọ na ụlọ ọrụ aha, adreesị na ika njirimara nke Party A. Party B na-ekwe nkwa na ngwaahịa na-emepụta adịghị emebi ọ bụla nke atọ ikike ikike ọgụgụ isi na ziri ezi ikike na ọdịmma.
2. Party B na-ekwe nkwa na ndị na-egosi ngwaahịa ndị a na-enye kwekọrọ n'ụkpụrụ ngwaahịa ugbu a nke ndị ahịa na ihe ndị dị mkpa nke ụkpụrụ mba, na ngwaahịa ndị a na-enye kwekọrọ na ihe ndị dị mkpa nchedo gburugburu ebe obibi.
3. A na-ere ngwaahịa OEM kpamkpam site na Party A. Party B abụghị maka ire ere.Party B agaghị ere ngwaahịa OEM nke Party A nyefere n'aka ndị ọzọ ọ bụla.
4. Mgbe ngafe ma ọ bụ nchupu nke imekọ ihe ọnụ, Party B agaghị emeputa ma ọ bụ na-ere ngwaahịa na Party A si akara logo n'ụdị ọ bụla.
5. Party A nwere ikike izipu ndị ọrụ na-elekọta akụrụngwa, ngwa, dum usoro mmepụta, ngwaahịa àgwà, wdg nke OEM ngwaahịa.Party B na-akwado ma na-enyere aka na mbọ niile.
3. Ebe, ụzọ na ọnụ ahịa nnyefe (nnyefe)
1. A na-ekpebi ya site na ntụle aka.
2. A ga-akwụ ụgwọ maka nkwakọ ngwaahịa na ime efere n'etiti ndị ọzọ.
4. Nkwakọ ngwaahịa na ihe nchekwa chọrọ
1. Party A ga-enye imewe drafts maka nkwakọ, agba igbe, ntụziaka, labels, nameplates, asambodo nke conformity, akwụkwọ ikike kaadị, wdg Party B ga-akwụ ụgwọ nke ịzụrụ, mmepụta na mmepụta, na Party A ga-akwado na mechie na. ihe atụ.
2. Mgbe ngafe ma ọ bụ nchupu nke imekọ ihe ọnụ n'etiti abụọ ọzọ, Party B agaghị enwe ikike iji ma ọ bụ mepụta ọ bụla ngwaahịa na Party A logo n'ụzọ ọ bụla.
5. Njikwa ika
1.The nwe nke ụghalaahịa nyere site Party A (gụnyere nkwakọ imewe, ndịna-emeputa, Chinese odide, English na ya Nchikota, wdg) bụ nke Party A. Party B ga-eji ụghalaahịa n'ime akporo ikike site Party A na agaghị nyefee ma ọ bụ gbasaa obosara nke ojiji ya na-enweghị ikike.
6. Mgbe-sales Service
1. Oge ire ere na oge ikike ka a ga-ekwurịta n'etiti akụkụ abụọ ahụ.
2. Party B na-emezu oke ọrụ ndị dị mkpa akọwapụtara na Iwu Ogo Ngwaahịa nke Republic of China.Otu B ga-eme mgbalị ọ bụla iji dozie nsogbu nke nloghachi na mgbanwe ngwaahịa nke nsogbu ịdịmma Party B kpatara, yana Party B ga-akwụ ụgwọ ndị metụtara ya;Ndị otu A ga-ahụ maka mmefu ndị metụtara ya kpatara na mmebi ngwaahịa kpatara site na iji ihe na-adịghị mma.